Beesha caalamka oo soo dhoweysay heshiiskii woqooyiga iyo Koonfurta Sudan ku gaareen dalka Ethiopia – SBC
Beesha caalamka oo soo dhoweysay heshiiskii woqooyiga iyo Koonfurta Sudan ku gaareen dalka Ethiopia
Posted by editor on June 22, 2011 Comments
Washington:-Xoghayaha arrimaha dibadda mareykanka Hillary Clinton ayaa soo dhoweysay heshiiskii dhinacayada Sudan ay ku gaareen magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia.
Clinton ayaa sheegtay in heshiiskan uu yahay alaabo muhim ah balse imtixaanka dhabta ah uu yahay sidii loo fulin lahaa dhamaan qodobadii ku saabsanaa heshiiskan.
Hillary Clinton waxa ay intaas ku dartay in dalkeeda uu kala shaqeyn doono golaha amaanka sidii uu u soo bixi lahaa qaraar ku aadan ciidamo ka socda dalka Ethiopia oo si deg deg ah loo geeyo Abyeey.
Sidoo kale Hillary Clinton waxa ay ugu baaday dhamaan dhinacyada Sudan in ay ilaaliyaan heshiiska islamarkaana ciidamadooda kala baxaan deegaankaas ayna u ogolaadaan tobnaan kun oo qof oo ka barakacay halkaas in ay guryahooda dib ugu laabtaan.
Sidoo　kale safiirka mareykanka ee QM Susana Rice ayaa sheegtay in muhiim ay tahay in ciidamo Ethiopian ah oo ku shaqeenaya magaca QM la geeyo Abyeey sida ugu dhaqsaha badan.
Dhanka kale xoghayaha guud ee Qm Baan Kiin Muun ayaa soo dhoweeyey heshiiska woqooyiga iyo koonfurta Sudan ay ka gaareen qadiyada Abyeey islamarkaana wuxuu ku baaqay in deegaanka laga dhiso maamul iyo ciidan boolis ah.
Madaxweynihii hore dalka Koonfur Africa thambo Mbeki ahna gudomiyaha guddiga u qaabilsan Midowga Africa dhexdhexaadinta woqooyiga iyo konfurta Sudan ayaa sheegay in Woqooyiga iyo koonfurta Sudan ay ku heshiiyeen in deegaanka Abyeey ee lagu muransan yahay ay noqoto goob ka caagan hubka, islamarkaana si deg deg ah loo geeyo ciidamo Ethiopian ah oo nabad ilaalin ah.
Deegaanka Abyeey ayaa ah mid kamid ah baraha khilaafaadka u dhexeeya woqooyiga iyo koonfurta sudan oo ku dhawaaqi doono madaxbaanideeda 9 bisha July ee soo socota.